Machadka Badbaadada Dadweynaha
Talada maaraynta degdega ah ee khabiirka ah
ITRA waxay aqoonsan tahay tababarka samatabbixinta farsamada
Ku soo DHAWOOW Machadka Badbaadada Dadweynaha
PSI waxay siisaa adeegyo caalami ah oo ku saabsan falanqaynta badbaadada dadweynaha, latalinta, cilmi baarista, waxbarashada iyo tababarka. Isticmaalka shabakadaha caalamiga ah ee la taliyayaasha khabiirada waxaan wax ka qaban karnaa mashaariicda si aan u hubinno jawaab celin waxtar leh oo ku wajahan caqabadaha badbaadada dadweynaha ee berrito laga bilaabo maareynta musiibada ilaa samatabbixinta farsamada.
La-talinta amniga dadwaynaha iyo falanqaynta baadhista ee khubarada aduunka dhabta ah ee leh shahaadooyinka shahaadada jaamacadeed.
ITRA waxay siisay tababar caalami ah oo ay ku jiraan xadhig, meel xaddidan iyo samatabbixinta biyaha daad. Laga soo bilaabo aasaaska ilaa heerka macalinka.
Waxaan bixinaa cilmi baaris ku saabsan arrimaha la xiriira badbaadada dadweynaha, laga bilaabo maareynta degdega ah, daryeelka xoolaha ilaa samatabbixinta farsamada.
Tababarka Badbaadada Daadka
Haddii aad leedahay shaqaale ka shaqeeya ama kaxeynaya hareeraha webiyada, balliyada, kanaalka ama marin biyoodyada kale, miyaad si ku filan u gudatay waajibaadyadaada si aad u ilaaliso iyaga marka loo eego sharciga caafimaadka iyo badbaadada?
Waxaan bixinaa tababbarka badbaadada biyaha ee gaarka ah oo la aqoonsan yahay Ururka Samatabbixinta Farsamada Caalamiga ah.
Daadka Luuqadaha Badan ee khadka tooska ah & Koorasyada Biyaha Dabka Hadda waa bilaash
Dhammaan koorasyadayada khadka tooska ah ayaa hadda ah kuwo luuqado badan ku hadla iyadoo la isticmaalayo GTranslate. Goobtan xoogga badan waxay isticmaashaa tarjumaada mashiinka neerfaha si ay u bixiso tayada tarjumaada heerka aadanaha. Read More
Aqoon is-weydaarsiga Macallin Samatabbixinta Gaadiidka Swiftwater
Machadka Badbaadada Dadweynaha wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo aqoon-is-weydaarsiga macalinka samatabbixinta ee ITRA Swiftwater ee samatabbixinta baabuurta oo lagu qabanayo 10-14 Juun, 2020 ee Mangahao Whitewater Park, Shannon, New Zealand. <="" p=""> Read More
Wicitaannada codsiyada kafaalaqaadka caalamiga ah
Haddii aad tahay urur ka baxsan New Zealand iyo Australia, PSI waxay hadda raadinaysaa diiwaan gelin xiiso leh si ay u caawiso urur aan sahayda u haysan si ay u horumariyaan awoodda samatabbixinta daadadka ee dalkooda. Read More
© Xuquuqda daabacaadda 2021. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin. Shuruudaha iyo Xaaladaha | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah